DEG-DEG: Musiibada Korona Fayras Ee Liverpool Oo Sii Socota & Xiddigii SHANAAD Oo Laga Helay Mudo Kooban Gudaheed - Gool24.Net
DEG-DEG: Musiibada Korona Fayras Ee Liverpool Oo Sii Socota & Xiddigii SHANAAD Oo Laga Helay Mudo Kooban Gudaheed
Kooxda Liverpool ayaa dhexda kaga sii jirta dhibaatooyinka gaarka ah ee uu xanuunka dunida saamaynta balaadhan ku yeeshay ee Korona Fayras kusoo samaynayay muddooyinkan ugu dambeeyay safka kooxdeeda.
Iyadoo hore loo ogaa in xanuunka laga helay dhawr ciyaaryahan oo Liverpool ah ayay warar hadda soo baxayaa sheegayaan in sidoo kale caabuqaas laga helay kubad sameeye Naby Keita oo ku maqan waajibaadkiisa xulka Guinea.
Keita ayaa ka maqnaa kulankii xulkiisa Guinea uu guusha 2-1 ka ah ka gaadhay dhigiida Cape Verde walow ay jiraan warar sheegaya inuu keydka ku jiray ciyaartaas.
Xaqiiqada ah Naby Keita doorkiisii kulankaas ayaa ah mid aan wali meel saarnayn oo aan la hubin balse ilo lagu kalsoon yahay oo ka imanaya dalkiisa Guinea ayaa sheegaya inuu ku jiro shan ciyaaryahan oo xanuunka laga helay.
Wargeyska foot224 oo ah midka xogtan laga helayo aadna loogu kalsoon yahay marka ay noqoto arrimaha kubadda cagta ee Guinea ayaa sheegaya in Keita uu tijaabada xanuunka Arbacadii maray isla markaana uu natiijada helay Jimcihii kahor intii aan baadhitaan labaad lagu xaqiijin in xanuunku hayo.
Afarta xiddig ee kale ee ka tirsan xulka Guinea ee laga helay xanuunka ayaa kala ah Kamano, Ibrahima Kone, Ibrahima Kamara iyo Florentin Pogba oo ah walaalka Paul Pogba.
Keita ayaa noqonaya ciyaaryahankii shanaad ee Liverpool ah ee mudo kooban lagaga helo xanuunka waxaana ka horreeyay Kostas Tsimiskas, Thiago Alcantara, Sadio Mane iyo Xherdan Shaqiri.